Plagiarism အရေးပါပုံကိုဗဟုသုတအနဖွေငျ့လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ဘာကွောငျ့မြား "Plagiarism"က ဒီလောကျတောငျ အရေးပါရတာလဲ? စာသငျသားမြား အထူးဂရုပွုသငျ့တဲ့ PLAGIARISM (ခိုးယူကူးခခြွငျး) အကွောငျးကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ မှီငွမျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
သုတသေနပွုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ, ကမျြးပွုစုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ, Research Proposal ရေးသားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှအေနနေဲ့ Plagiarism အကွောငျးကို လုံးဝခနျြလှပျထားလို့မရပါဘူး။
၁။ What is Plagiarism?
The Macmillan English Dictionary ရဲ့ အနကျဖှငျ့ဆိုခကျြအရ "Plagiarism ဆိုသညျမှာ တဈစုံတဈဦး၏ အတှေးအချေါမြား(Ideas)၊ စကားလုံးမြား(Words) သို့မဟုတျ လုပျဆောငျခကျြမြားကို ထိုသူထံမှ ဌားရမျးသုံးစှဲထားကွောငျး မှနျကနျတိကစြှာ ဖျောပွခွငျးမရှိဘဲ မိမိ၏အတှေးအချေါ၊ လုပျဆောငျခကျြမြားအသှငျ ခိုးယူခွငျး သို့မဟုတျ ကူးခခြွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။
၂။ Plagiarism ကြူးလှနျခဲ့ရငျ အရေးယူခံရမှာလား?
(Panalties) Plagiarismကိုကြူးလှနျကွောငျး ပျေါလှငျထငျရှားပွီဆိုရငျတော့ အောကျပါပွဈဒဏျတဈရပျရပျနဲ့ မုခအြရေးယူခံရမှာပါ။ မှတျသားအပျတဲ့ အပွဈပေးမှုပုံစံမြားမှာ
- သကျဆိုငျရာပါမောက်ခ၏ သတိပေးမှုခံရခွငျး။
- ကြောငျးမှအပွီးအပိုငျ အထုတျခံရခွငျး စသောပွဈဒဏျတှေ အပေးခံရနိုငျပါတယျ။
တဈခြို့ကိစ်စတှမှောဆို ကြူးလှနျသူကို တရားရုံးမှာတရားစှဲဆိုခံရနိုငျပွီး ထောငျဒဏျ/ ငှဒေဏျတှပေါခမြှတျခံရနိုငျပါတယျ။
အဖွကေရှငျးပါတယျ... ဥပဒရှေုတောငျ့အရ သုံးသပျကွမယျဆိုရငျလညျး Plagiarism ဆိုတဲ့ပွဈမှုအဂါင်္ရပျထဲမှာ ခိုးယူခွငျး (Stealing) နှငျ့ လိမျညာလှညျ့ဖွားခွငျး (Lying)ဆိုတဲ့ပွဈမှု (၂) ရပျပါဝငျနတောတှရေ့တာကွောငျ့ ပေါ့ပေါ့ဆဆမတှေးဘဲ အထူးဂရုပွုလိုကျနာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
Computer Repair (300) ကှနျပြူတာပွုပွငျထိနျသိမျးရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး (၃၀၀) ခုရှာရနျနှိပျပါ။
၃။ Plagiarism အမြိုးအစားမြား (Types)
Plagiarism အမြိုးအစားတှကေ ရှုပျထှေးမြားပွားတာကွောငျ့ ကမျြး/ သုတသေန ပွုစုရေးသား သူမြား အနနေဲ့ အထူးဂရုပွု လလေ့ာမှတျသားဖို့လိုအပျပါတယျ။ အခွခေံအားဖွငျ့ Plagiarismအမြိုးအစား (၂) မြိုးရှိပါတယျ။ Citation လုံးဝမထညျ့ဘဲ ကြူးလှနျသော Plagiarism နှငျ့ Citation ပါလကျြသား ကြူးလှနျသော Plagiarismလို့ ခှဲခွားရမှာဖွဈပါတယျ။
(၁) Citation လုံးဝမထညျ့ဘဲ ကြူးလှနျခွငျး ( Sources Not Cited)
ပထမအမြိုးအစားဖွဈတဲ့ Citation လုံးဝမထညျ့ဘဲ သူမြားအတှေးအချေါတှကေို သူ့ရဲ့အတှေးအချေါယောငျယောငျ ခိုးယူကူးခသြူတှကေတော့ အပငျြးဆုံး/ အဖငျြးဆုံး ပုဂ်ဂိုလျကွီးတှလေို့သမုတျရပါမယျ။ အဲဒီလိုပုဂ်ဂိုလျတှကေလညျး အမြိုးမြိုးကှဲပွားပါသေးတယျ။ ပိုငျးခွားကွညျ့မယျဆိုရငျ...
** Word for Word သမား
ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဗနျး(ရှဲဒိုး)သမား / English လို Ghost Writerလို့ချေါပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သူတဈပါးရဲ့စာတှေ/ အတှေးအချေါတှကေို တဈသဝမေသိမျး လုံးစပေ့တျစေ့ ခိုးယူကူးခကြွတဲ့သူတှဖွေဈကွလို့ပါ။
** Photocopy သမား
ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေိုတော့ Copy-Pase သမားလို့ဆိုရမှာဖွဈတယျ။ ဆိုလိုတာက သူတဈပါးရဲ့အတှေးအချေါ/ စကားလုံးတှကေို မိတ်တူပှားသညျ့အလား ပုံသခေိုးခသြူလို့ဆိုရပါမယျ။
** ကွုံရာကပြနျးသမား/ ရမျးသနျးလိမျဆှဲသမား
English လို "Potluck Paper" ချေါပါတယျ။ ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေတော့ သူခိုးလူလညျပါပဲ။ သူတို့ဟာ သူတဈပါးရဲ့ အတှေးအချေါ/ စကားလုံးကိုခိုးကူးဖို့ မြားမွှောငျရှုပျထှေးတဲ့ အရငျးအမွဈတှမှေတဈဆငျ့ ကှယျဝှကျခိုးကူးခသြူတှဖွေဈပါတယျ။
English လို "The Poor Disguise"လို့ချေါပါတယျ။ သူတို့ဟာ သူတဈပါးရေးသားထားပွီးသား စာကွောငျးတှထေဲက Key Words နှငျ့ Phrases တှကေို မဆိုသလောကျပွောငျးပဈပွီးတော့ ရုပျဖကျြခိုးကူးခတြဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
သူကို "The Labor of Laziness" လို့ချေါပါတယျ။ သူတို့ဟာ နယျပယျတဈခုခုကို စိုကျစိုကျမတျမတျ စကားပွပွေနျဆိုတာ(Paraphrase) မဟုတျဘဲ ပငျြးရိစှာ အုတျရောရော ကြောကျရောရော ပွီးပွီးရောကူးခသြူတှဖွေဈပါတယျ။
** Self- Stealer သမား
ဒီကိစ်စက အထူးအရေးပါသလို အံ့သွဖို့လညျးကောငျးပါတယျ။ ဆိုလိုတာက မိမိရဲ့အတိတျက အတှေးအချေါတှကေိုပငျလငျြ ပွနျပွီးသုတသေနလုပျခငျြရငျ Citation ထညျ့ရပါမညျ။ ငါ့ပစ်စညျးငါပိုငျတာပဲ ငါ့အတှေးအချေါပဲဆိုပွီး Citation မထညျ့မိရငျ Plagiarism ကြူးလှနျတယျလို့မှတျယူပါတယျ။ ကိုယျပိုငျပစ်စ်စညျးတောငျ အမြားအသိမပေးဘဲကူးခရြငျ ခိုးကူးတယျလို့သတျမှတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျပိုငျတဲ့ပစ်စညျးတောငျ အမြားအသိမပေးဘဲ ယူသုံးရငျ ခိုးမှုမွှောကျတာ Plagiarism မှာပဲရှိပါတယျ။
(၂) Citation ပါလကျြ ကြူးလှနျခွငျး (Sources Cited but Still Plagiarized)
Plagiarism ကစညျးကမျးအလှနျကွီးပါတယျ။ Ciatation ထိုးပွီးတာနဲ့မပွီးသေးပါဘူး။ Citation တှကေိုလညျးနညျးလမျးတကြ မညှနျပွနိုငျဘူးဆိုရငျ Plagiarism ကိုကြူးလှနျတာပါပဲ။ဒုတိယအုပျစုဟာ ရှုပျထှေးလေးနကျတာကွောငျ့ အသေးစိတျဂရုတဈစိုကျ လိုကျနာမှတျသားဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒီအုပျစုအမြိုးအစားကိုလညျး ခှဲခွမျးစိတျဖွာကွညျ့မယျဆိုရငျ
** Footnote ထညျ့ရနျပကျြကှကျမှု
သူတဈပါးအတှေးအချေါတှကေို မိမိစာတမျးမှာထညျ့ရေးတဲ့အခါ ၎င်းငျးနာမညျကိုဖျောပွပေးပမေယျ့ ခုနှဈ စာမကျြနှာတှကေိုထညျ့ဖို့ပကျြကှကျရငျ Plagiarismကြူးလှနျတယျလို့သတျမှတျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ စာမကျြနှာ/ ခုနှဈအတိအကမြပေးတာဟာ သတငျးအခကျြအလကျ အရငျးအမွဈကိုရှုပျထှေးစပေါတယျ။ မရိုးမဖွောငျ့တဲ့သဘောနဲ့ ဖုံးဖိခငျြတာလို့လဲ အစှပျစှဲခံရနိုငျပါတယျ။
** Quotation Mark ထညျ့ရနျပကျြကှကျမှု
The Too Perfect Paraphrase လို့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ သူတဈပါးအတှေးအချေါကို တဈသဝမေသိမျး (word for word) copy ယူထားပွီး "Quotation Mark" ထညျ့ဖို့ပကျြကှကျရငျလဲ Plagiarismထိမှာပါပဲ။ Quotation Mark မထညျ့ခငျြရငျ စနဈတကြ စကားပွပွေနျ (Paraphrase) ရမှာဖွဈပါတယျ။
** The Resourceful Citer
ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေိုတော့ အရပျစကားဌားပွောခိုငျးနှိုငျးရရငျ "လူလညျကသြူ" တှလေို့ဆိုရမှာဖွဈတယျ။ တခြို့ကတြော့ နမျောနမဲ့/အမှုမဲ့အမှတျမဲ့ ကြူးလှနျမိတာလဲရှိပါတယျ။ သူတို့ဟာ Plagiarism အတှကျသတျမှတျထားတဲ့စညျးမညျြး/စညျးကမျးတှအေတိုငျး တဈသှမေသိမျး လိုကျနာတယျ။ Citation, Quotation, Pharaphrasing ကငျြ့သုံးမှု တဈခုမကနျြ အသေးစိတျ မှနျကနျမှုရှိတယျ။ ကဲဒါဆို ဘာကွောငျ့သူကို Plagiarism ကြူးလှနျတယျလို့ စှပျစှဲရပါသလဲ/သူဘယျလိုမြားကြူးလှနျခဲ့ပါသလဲ?
အဖွကေရှငျးပမေယျ နကျရှိုငျးပါတယျ။ အဲဒီကြောငျးသားက Citation, Quotation, Pharaphrasing စနဈတကလြိုကျနာပမေယျ့ မူလစာရေးဆရာရဲ့ Original Ideas/ Works မီးမှောငျးထိုးဖို့ပကျြကှကျနတေဲ့အတှကျ မူလအတှေးအချေါတှကေအခွားစာရေးရဲ့ Ideas/ Works ပုံစံပွောငျးလဲသှားလို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Citation, Quotation, Pharaphrasing လုပျကွတဲ့အခါ မူလစာရေးဆရာရဲ့ Original Ideas/ works တှကေို ထိထိမိမိ ရညျညှနျးကိုးကားနိုငျဖို့လိုအပျပါတယျ။
** The Perfect Crime
နောကျဆုံးပွဈမှုအမြိုးအစားဖွဈတဲ့ The Perfect Crime ကိုတော့ ကြူးလှနျသူ မရှိသလောကျ နညျးပါးပါတယျ။ သူတို့ဟာ Citation, Quotation တှကေို စနဈတကညြှနျပွပမေယျ့ Pharaphrasing ကိုတော့ တခွားသူဆီကနေ ခိုးခကြွတာပါ။
- အသုံးတညျ့မယျ့ Plagiarism Checkers linksမြား
- https://www.duplichecker.com - https://www.thepensters.co Citation Styles:::
နောကျဆုံးအခကျြအနနေဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြကတော့ Citation styles တှဖွေဈပါတယျ... မိမိရေးတဲ့ကမျြးက ဘယျလို style ကိုသုံးသငျ့သလဲဆိုတာ ကမျြးကွီးကွပျသူနဲ့တိုငျပငျဖို့လိုအပျပါတယျ....
အသုံးမြားတဲ့ Styles တှကေတော့
(1) APA ( American Psychological Association)
(2) Chicago Manual of Style
(3) MLA ( Modern Language Association)
(4) Turabian Style
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian citation guide. HTML...
(5) Legal Style
Post Credit-ဗကျြခနျြ (Kobe University, Japan)
မြှဝခှေငျ့ရတဲ့အတှကျ Myanmar Education Directory မှအထူးပငျကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ။
ဘာကြောင့်များ "Plagiarism"က ဒီလောက်တောင် အရေးပါရတာလဲ? စာသင်သားများ အထူးဂရုပြုသင့်တဲ့ PLAGIARISM (ခိုးယူကူးချခြင်း) အကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှီငြမ်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သုတေသနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ, ကျမ်းပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ, Research Proposal ရေးသားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ Plagiarism အကြောင်းကို လုံးဝချန်လှပ်ထားလို့မရပါဘူး။
The Macmillan English Dictionary ရဲ့ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်အရ "Plagiarism ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦး၏ အတွေးအခေါ်များ(Ideas)၊ စကားလုံးများ(Words) သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိုသူထံမှ ဌားရမ်းသုံးစွဲထားကြောင်း မှန်ကန်တိကျစွာ ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ မိမိ၏အတွေးအခေါ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များအသွင် ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ကူးချခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
၂။ Plagiarism ကျူးလွန်ခဲ့ရင် အရေးယူခံရမှာလား?
(Panalties) Plagiarismကိုကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်နဲ့ မုချအရေးယူခံရမှာပါ။ မှတ်သားအပ်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုပုံစံများမှာ
- သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခ၏ သတိပေးမှုခံရခြင်း။
- ကျောင်းမှအပြီးအပိုင် အထုတ်ခံရခြင်း စသောပြစ်ဒဏ်တွေ အပေးခံရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာဆို ကျူးလွန်သူကို တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံရနိုင်ပြီး ထောင်ဒဏ်/ ငွေဒဏ်တွေပါချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
အဖြေကရှင်းပါတယ်... ဥပဒေရှုတောင့်အရ သုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း Plagiarism ဆိုတဲ့ပြစ်မှုအဂါင်္ရပ်ထဲမှာ ခိုးယူခြင်း (Stealing) နှင့် လိမ်ညာလှည့်ဖြားခြင်း (Lying)ဆိုတဲ့ပြစ်မှု (၂) ရပ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရတာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆမတွေးဘဲ အထူးဂရုပြုလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Computer Repair (300) ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး (၃၀၀) ခုရှာရန်နှိပ်ပါ။
၃။ Plagiarism အမျိုးအစားများ (Types)
Plagiarism အမျိုးအစားတွေက ရှုပ်ထွေးများပြားတာကြောင့် ကျမ်း/ သုတေသန ပြုစုရေးသား သူများ အနေနဲ့ အထူးဂရုပြု လေ့လာမှတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် Plagiarismအမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ Citation လုံးဝမထည့်ဘဲ ကျူးလွန်သော Plagiarism နှင့် Citation ပါလျက်သား ကျူးလွန်သော Plagiarismလို့ ခွဲခြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Citation လုံးဝမထည့်ဘဲ ကျူးလွန်ခြင်း ( Sources Not Cited)
ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Citation လုံးဝမထည့်ဘဲ သူများအတွေးအခေါ်တွေကို သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်ယောင်ယောင် ခိုးယူကူးချသူတွေကတော့ အပျင်းဆုံး/ အဖျင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလို့သမုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါသေးတယ်။ ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်...
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဗန်း(ရှဲဒိုး)သမား / English လို Ghost Writerလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့စာတွေ/ အတွေးအခေါ်တွေကို တစ်သဝေမသိမ်း လုံးစေ့ပတ်စေ့ ခိုးယူကူးချကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြလို့ပါ။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ Copy-Pase သမားလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက သူတစ်ပါးရဲ့အတွေးအခေါ်/ စကားလုံးတွေကို မိတ္တူပွားသည့်အလား ပုံသေခိုးချသူလို့ဆိုရပါမယ်။
** ကြုံရာကျပန်းသမား/ ရမ်းသန်းလိမ်ဆွဲသမား
English လို "Potluck Paper" ခေါ်ပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ သူခိုးလူလည်ပါပဲ။ သူတို့ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ အတွေးအခေါ်/ စကားလုံးကိုခိုးကူးဖို့ များမြှောင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေမှတစ်ဆင့် ကွယ်ဝှက်ခိုးကူးချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
English လို "The Poor Disguise"လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတစ်ပါးရေးသားထားပြီးသား စာကြောင်းတွေထဲက Key Words နှင့် Phrases တွေကို မဆိုသလောက်ပြောင်းပစ်ပြီးတော့ ရုပ်ဖျက်ခိုးကူးချတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူကို "The Labor of Laziness" လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နယ်ပယ်တစ်ခုခုကို စိုက်စိုက်မတ်မတ် စကားပြေပြန်ဆိုတာ(Paraphrase) မဟုတ်ဘဲ ပျင်းရိစွာ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော ပြီးပြီးရောကူးချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စက အထူးအရေးပါသလို အံ့သြဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိမိရဲ့အတိတ်က အတွေးအခေါ်တွေကိုပင်လျင် ပြန်ပြီးသုတေသနလုပ်ချင်ရင် Citation ထည့်ရပါမည်။ ငါ့ပစ္စည်းငါပိုင်တာပဲ ငါ့အတွေးအခေါ်ပဲဆိုပြီး Citation မထည့်မိရင် Plagiarism ကျူးလွန်တယ်လို့မှတ်ယူပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စ္စည်းတောင် အများအသိမပေးဘဲကူးချရင် ခိုးကူးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတောင် အများအသိမပေးဘဲ ယူသုံးရင် ခိုးမှုမြှောက်တာ Plagiarism မှာပဲရှိပါတယ်။
(၂) Citation ပါလျက် ကျူးလွန်ခြင်း (Sources Cited but Still Plagiarized)
Plagiarism ကစည်းကမ်းအလွန်ကြီးပါတယ်။ Ciatation ထိုးပြီးတာနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ Citation တွေကိုလည်းနည်းလမ်းတကျ မညွှန်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင် Plagiarism ကိုကျူးလွန်တာပါပဲ။ဒုတိယအုပ်စုဟာ ရှုပ်ထွေးလေးနက်တာကြောင့် အသေးစိတ်ဂရုတစ်စိုက် လိုက်နာမှတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုအမျိုးအစားကိုလည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆိုရင်
** Footnote ထည့်ရန်ပျက်ကွက်မှု
သူတစ်ပါးအတွေးအခေါ်တွေကို မိမိစာတမ်းမှာထည့်ရေးတဲ့အခါ ၎င်းနာမည်ကိုဖော်ပြပေးပေမယ့် ခုနှစ် စာမျက်နှာတွေကိုထည့်ဖို့ပျက်ကွက်ရင် Plagiarismကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာမျက်နှာ/ ခုနှစ်အတိအကျမပေးတာဟာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်ကိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ မရိုးမဖြောင့်တဲ့သဘောနဲ့ ဖုံးဖိချင်တာလို့လဲ အစွပ်စွဲခံရနိုင်ပါတယ်။
** Quotation Mark ထည့်ရန်ပျက်ကွက်မှု
The Too Perfect Paraphrase လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သူတစ်ပါးအတွေးအခေါ်ကို တစ်သဝေမသိမ်း (word for word) copy ယူထားပြီး "Quotation Mark" ထည့်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်လဲ Plagiarismထိမှာပါပဲ။ Quotation Mark မထည့်ချင်ရင် စနစ်တကျ စကားပြေပြန် (Paraphrase) ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ အရပ်စကားဌားပြောခိုင်းနှိုင်းရရင် "လူလည်ကျသူ" တွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ တချို့ကျတော့ နမော်နမဲ့/အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ကျူးလွန်မိတာလဲရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ Plagiarism အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျည်း/စည်းကမ်းတွေအတိုင်း တစ်သွေမသိမ်း လိုက်နာတယ်။ Citation, Quotation, Pharaphrasing ကျင့်သုံးမှု တစ်ခုမကျန် အသေးစိတ် မှန်ကန်မှုရှိတယ်။ ကဲဒါဆို ဘာကြောင့်သူကို Plagiarism ကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲရပါသလဲ/သူဘယ်လိုများကျူးလွန်ခဲ့ပါသလဲ?
အဖြေကရှင်းပေမယ် နက်ရှိုင်းပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားက Citation, Quotation, Pharaphrasing စနစ်တကျလိုက်နာပေမယ့် မူလစာရေးဆရာရဲ့ Original Ideas/ Works မီးမှောင်းထိုးဖို့ပျက်ကွက်နေတဲ့အတွက် မူလအတွေးအခေါ်တွေကအခြားစာရေးရဲ့ Ideas/ Works ပုံစံပြောင်းလဲသွားလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Citation, Quotation, Pharaphrasing လုပ်ကြတဲ့အခါ မူလစာရေးဆရာရဲ့ Original Ideas/ works တွေကို ထိထိမိမိ ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြစ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ The Perfect Crime ကိုတော့ ကျူးလွန်သူ မရှိသလောက် နည်းပါးပါတယ်။ သူတို့ဟာ Citation, Quotation တွေကို စနစ်တကျညွှန်ပြပေမယ့် Pharaphrasing ကိုတော့ တခြားသူဆီကနေ ခိုးချကြတာပါ။
- အသုံးတည့်မယ့် Plagiarism Checkers linksများ
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Citation styles တွေဖြစ်ပါတယ်... မိမိရေးတဲ့ကျမ်းက ဘယ်လို style ကိုသုံးသင့်သလဲဆိုတာ ကျမ်းကြီးကြပ်သူနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်....
အသုံးများတဲ့ Styles တွေကတော့
Post Credit-ဗျက်ချန် (Kobe University, Japan)
မျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက် Myanmar Education Directory မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Latest Post Tips Read 706 times